Mandehandeha avy any Mexico mankany Eropa - Fantatrao ve ireo fepetra vaovao? | Vaovao momba ny dia
Susana godoy | | soso-kevitra
Mipetraka any Mexico ve ianao ary ny nofinofisinao dia ny handeha ho any Eropa hankafizanao ny fomba amam-panao sy ny toerana tsy manam-paharoa? Raha eny ny valiny dia eo amin'ny toerana tsara indrindra ianao. Hilaza aminao ny zavatra takiana fototra izahay mba hahafahanao manao fitsangatsanganana avy any Mexico mankany Eropa amin'ny filaminana sy fahatokisana tanteraka.
Matetika amin'ny tranga maro rehefa misy dia toy izany dia tsy fantatsika foana hoe antontan-taratasy izay angatahinao aminay. Aorian'ny hahitana azy ao ambadik'ireto andalana ireto dia tsy hiala sasatra fotsiny ianao ary hankafy ny fialantsasatra mendrika, satria tsy dia manintona toy ireny foana izy ireo.
1 Fepetra takiana amin'ny visa avy any Mexico mankany Eropa ve ny visa?
2 Ny pasipaoro, manan-kery foana
3 Ny endrika ETIAS
4 Tapakila fitsangatsanganana
5 Fiantohana ara-pahasalamana, safidy tsara foana
6 Famandrihana isan'andro
Fepetra takiana amin'ny visa avy any Mexico mankany Eropa ve ny visa?
Raha tsy misy fisalasalana dia iray amin'ireo fanontaniana napetraka indrindra io hatrany. Ny marina dia raha handeha ianao latsaky ny telo volana mitsidika an'i Eoropa na ilay antsoina hoe faritra Schengen, dia tsy mila visa ianao. Ka raha roa herinandro monja na mihoatra ny fialan-tsasatrao dia tsy tokony hatahotra ianao satria tsy mila mangataka an'ity antontan-taratasy ity, satria fantatra fa mandalo fotsiny ianao.
Ny pasipaoro, manan-kery foana
Tokony hotadidinao fotsiny izany ny pasipaoro dia tsy maintsy mitombina hatrany. Saingy mitranga izany na inona na inona toerana alehantsika. Amin'ity tranga ity dia momba an'i Eropa izy io ary tsy maintsy ataontsika vaovao hatrany ny zava-drehetra mba tsy hisy olana. Ny valiny dia tsy maintsy ahitana mihoatra ny telo volana.
Ny endrika ETIAS
Nandritra ny telo taona mahery dia nisy dingana vaovao natsangana mba hitety an'i Mexico mankany Eropa. Hatramin'ny taona 2021, ny Meksikana rehetra dia tsy maintsy mameno ity takelaka ity na fahazoan-dàlana. Azo antsoina hoe karazana fanomezan-dàlana hahafahana mankafy ny dianao tsy misy olana lehibe. Azonao atao ny mameno ity takelaka antsoina hoe ETIAS ity amin'ny Internet ary manan-kery mandritra ny telo taona.
Ao anatiny no tsy maintsy ampidirinao ny anaranao, ny antsipirian'ny dia, ary ny mombamomba ny pasipaoro, sns. Misy foana a torolàlana amin'ny famitana ny endrika ETIAS izany dia hanampy anao amin'izay ilainao. Afaka minitra vitsy ary aorian'ny fandoavam-bola mitentina fito euro (160 peso Meksikana) dia ho vonona ianao. Aorian'ity fangatahana ity dia hanana valiny roa na telo andro ianao ao amin'ny adiresy mailakao. Izany rehetra izany dia manana ny tanjon'ny afaka manamafy ny filaminana any Eropa.
Tsy maintsy mitazona tsara ny tapakilan'ny fiaramanidina ianao. Satria na dia mety tsy ho priori aza izany dia azon'izy ireo atao ny mangataka azy ireo amin'ny fotoana rehetra. Izany dia hampiseho fa tena manana ianao datin'ny fidirana amin'ny firenena samihafa, fa koa output. Noho io antony io dia tsy maintsy entintsika miaraka amintsika foana izy ireo, voatahiry tsara, saingy tsy dia be loatra satria afaka manadino akory ny paosin'ny valizy na ny kitapo misy azy ireo isika.
Fiantohana ara-pahasalamana, safidy tsara foana
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy voatery hiditra amin'ny firenena eoropeanina fa ilaina izany. Satria rehefa lavitra ny trano isika ary mandritra ny andro maro dia tsy misy mahafantatra izay mety hitranga. Isaky ny mandeha any amin'ny firenen-kafa isika dia tsy maninona izany maka fiantohana Manarona ireo zavatra ilaina izahay, indrindra amin'ny resaka fahasalamana sy ny vonjy taitra. Raha mandeha miaraka amin'ny ankizy isika, dia lasa mihoatra ny ilaina izany, satria araka ny fantatsika, dia mety harary matetika kokoa noho ny tadiavintsika izy ireo.
Tsy mitranga foana izany, fa amin'ny fifindra-monina dia azo atao ny zava-drehetra. Indraindray, azon'izy ireo atao koa ny mangataka ny lalam-pirenena nomarihinay. Mazava ho azy fa tsy fantatry ny mpandeha ny faritra tena hifindrany foana, eny fa hanampy betsaka ny fanaovana famandrihana hotely na fitsidihana. Araka ny filazantsika azy dia tsy zavatra tsy maintsy atao izany, fa ny fitoniana, tsy misy toa ny mitondra ilay famandrihana an-tserasera izay nangatahinay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » soso-kevitra » Fepetra takiana amin'ny dia avy any Mexico mankany Eropa
Mahita Rascafría any Madrid